Izinhlelo zokubeka ithayili - eDivenland
Amathayili we-Ceramic asetshenziswa kabanzi njengezinto zokuhlobisa ezisebenzayo, eza ngezindlela ezahlukahlukene nosayizi ohlukile, isisindo seyunithi nobuningi. umehluko, nokuthi unginamathisela kanjani lokhu kuqina okungapheli bekulokhu kuyinkinga. Ukuqala kwezinamathiselo zama-tile kuye kwaqinisekisa ngezinga elithile ukuthembeka kwephrojekthi yokuhlanganisa, futhi ama-ethers weselula wokulunga angaqinisekisa ukuthi izinhlobo ezihlukile zokwenza i-tile Smooth ekwakhiweni okuhlukile.
Izidingo zesigaxa sethayela zingahlangatshezwa ngokufakwa kwemikhiqizo ye-cellulose ether. Udaka lungaqhekeka kalula futhi lube namandla; ukugcinwa kwamanzi okuhle kunciphisa inani lamanzi odakeni elimuncwa yi-substrate namathayili, futhi kunciphisa inani lamanzi odakeni elimuncwa yi-substrate namathayili. igcinwe ku-binder ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela ivumela ukumbozwa kodaka ukuthi kuhlale kuboshiwe isikhathi eside, ngezikhathi ezivulekile ngokwedlulele. I-viscosity efanele inika ukungaguquguquki kodaka futhi ithuthukise ukuvumelana kogwayi ku-tile kanye substrate. Amandla wetting wokuthuthukisa ukunamathela kogwayi, ikakhulukazi ekwakhiweni kwesilinganiso somlotha ophezulu; ama-ethers akhethekile aguquliwe angaqinisekisa ukuthi ukwakhiwa kwama-tile Ngeke kuhambe, ikakhulukazi ngamathayili asindayo namamabula. Ukukhetha ama-ether elungile e-cellulose kuvumela isibopho sethayela ukufeza amandla aphezulu ebondeni, ukuhlinzeka ngokushisa okushisa okuphezulu emazingeni okushisa aphezulu. Kulokhu, futhi kunika i-tile binder isikhathi eside esivulekile nesishintshashintshayo.
Njengendima ebalulekile yephrojekthi yokunamathisela i-tile, i-sealant ehlanganisiwe ayithuthukisi kuphela umphumela jikelele weprojekthi yokuhlanganisa ama-tile noma umphumela wokuqhathanisa. Iqhaza elibalulekile, kodwa futhi nasekuthuthukiseni ukungangeni kwodonga. Umbala ocebile futhi ofanayo uyisidingo esiyisisekelo semikhiqizo eminingi ye-ejenti yokujoyina, nayo okufanele ibe nokuncipha okuphansi, i-porosity ephansi, ukusebenza okulula namandla asheshe aphakeme. izakhiwo. Ama-cellulose ethers angama-admixtures afanelekile alezi zakhiwo.
Kungathuthukisa ukuhlangana kodaka nokunamathela kokuqukethwe ngaphandle kokugogeka, futhi inamandla okugcina amanzi nokungena okuphansi, okungagxilisa udaka ngokugcwele futhi kugweme ukuqhekeka.